XOG XASAASI: Madaxweynaha Puntland ‘Deni’ oo ku gacan-seeray dalab kaga yimid DF Soomaaliya! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG XASAASI: Madaxweynaha Puntland ‘Deni’ oo ku gacan-seeray dalab kaga yimid...
XOG XASAASI: Madaxweynaha Puntland ‘Deni’ oo ku gacan-seeray dalab kaga yimid DF Soomaaliya!
Boosaaso (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ku gacan seyray dalab ugu yimid dowladda Soomaaliya oo ku aadanaa in uusan ka qeyb galin Xafladda Caleema-saarka Madaxweynaha Maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).
Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo shalay gaaray magaaladda Boosaaso ayaa xalay kulan la yeeshay Madaxweyne Deni,waxaana la xaqiijiyay in Deni ku Gacan seyray dalabka Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Wasiiradda ayaa madaxweyne Deni waxa ay u soo bandhigeen in la xalliyo khilaafka u dhexeeya Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo Puntland, si meesha looga saaro mad-nadowga labada dhinac,waxayna dalbadeen in Puntland aysan ka qeyb-gelin munaasabadda caleema-saarka Madaxweynaha Jubaland, Axmed Maxamed Islaan.
Ugu dambeyn, Saciid Deni ayaa wafdiga u sheegay in Puntland mar walba diyaar u tahay in wada-hadal lagu xalliyo, khilaafka kala dhexeeya Villa Somalia, haddii si dhab ah looga wada-hadlayo dhammaan arrimaha ay ku muransan yihiin labada dhinac,balse, wuxuu gebi ahaanba diiday dalabkii ay hor-dhigeen ee ku aaddanaa in aysan Puntland ka qeyb-gelin caleema-saarka madaxweynaha Jubaland, Axmed Maxamed Islaam.
dalab kaga yimid Dowladda Somaliya
ku gacan seeray